Seaview eRamsgate/Margate 2 amagumbi okulala, 4 abantu
Margate, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
UWendy ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhaya elihle elinemigangatho emibini elinombono omangalisayo wolwandle olukwilali ethandekayo yaseRamsgate. Sikumgama ozimitha ezingama-400 ukusuka elunxwemeni. I-Ramsgate Boulevard yimizuzu emi-5 yokuhamba kwaye ine-Spar, iTops, ikhemisti, ugqirha njl. Isipha seDstv esigcweleyo. Idekhi yomlingo ejonge ulwandle ilindele ukuba uphelise usuku olushushu lwehlobo kunye nesundowners kunye nebraai. Umlilo okanye igesi. Iqula elikhazimlayo libekwe egadini ukuze ukonwabele.
Ikhaya lethu lentsapho linombono omhle we-breakers kwaye i-400 ukusuka kunxweme olusondeleyo. Kufuphi nazo zonke izinto eziluncedo, ezibekwe kwiRamsgate ezolileyo. Ikhaya lethu lilungele iintsapho kunye nezibini ezikhulileyo - hayi abafundi abafuna ukwenza itheko.
Siyayithanda indawo esihlala kuyo. IRamsgate yindawo ethule kakhulu kwaye sinemibono enomtsalane yolwandle/izaphuli. Ubugebenga buncinci apha eRamsgate. ikhaya lethu lilungele iintsapho kunye nezibini eziqolileyo - hayi abafundi abafuna itheko.
Sinendlu enemigangatho emibini kwaye sirenta isiqingatha esiphezulu sendlu kwiindwendwe. Sihleli kwisiqingatha esisezantsi sekhaya kwaye sikwisiza sayo nayiphi na imibuzo. Singaqhagamshelwa nge-imeyile: harry@southcity.co (nceda uqaphele: akukho za!) ukuba unomdla.
Sinendlu enemigangatho emibini kwaye sirenta isiqingatha esiphezulu sendlu kwiindwendwe. Sihleli kwisiqingatha esisezantsi sekhaya kwaye sikwisiza sayo nayiphi na imibuzo. Singaqha…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Margate